“Qabsoon hidhannoo kana booda barbaachisa miti. Rakkoon keessoo ABO ture kora sabaatiin furameera” #Jaal_Qajeelaa_Mardaasaa
Jaal Qajeela Mardaasa
“Rakkoo keessoo keenyatti uumamee tureen filannoo biyyaalessaa marsaa 6fa Waxabajjii 14 bara 2013 adeemsifamerratti hirmaachuu baannus filanichi adeemsifamuun barbaachisaa ta’uutti amanna” jedhan
Hayyuduree Ittaanaan ABO Jaal Qajeelaa Mardaasaa.
Jaal Qajeelaan ibsa Wixata darbe Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, ABOn yeroo kaadhimamtoota dhiyeeffachuu danda’utti rakkoo keessa ture. Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa rakkoo addicha keessatti uumamee turerraa ka’uun filannoo biyyaalessaa marsaa 6farratti nu hinhirmachisuu baatus filannichi adeemsifamuun barbaachisaa ta’uutti amanna.
Nuti waggoota dheeraaf biyya keessa waan hinturreef filannoorratti hirmaannee hinbeeknu. Utuu filannoo biyyaalessaa baranaarratti hirmaanneerra ta’ee muuxannoo irraa argachuus ta’e bu’aa buusuu dandeenya ture jedhu.
Filannoo kanaratti hirmaachuu dhabuun ABOf miidhaa guddaa ta’us filannoon ta’uu dhabuurra adeemsifamuusaatti amanna kan jedhan Jaal Qajeelaan, haala rakkisaa keessatti adeemsifamus nagaan xumuramuunsaa waan guddaa ta’uu eeru. Yeroo rakkoon nageenyaa kutaalee biyyattii adda addaatti uumametti dhiifnaan dur yeroma nagaadha jedhamuyyuu yeroo filannootti walitti bu’iinsa guddaatu ture.
ABOn haqinasaa guuttachuudhaan filannoo ittaanurratti of qopheessee dhiyaata jedhan.
Rakkoon ABO keessa ture kan nama dhuunfaati malee kan jaarmiyaa miti kan jedhan Jaal Qajeelaan, jaarmiyichi sirnaan akka hinhojjenne kan taasise namoota waan ta’aniif caasaan hoggansaasaas diigamuu eeran.
Rakkoo keessoosaanii furuufi ABOn akka jaarmiyaatti akka ittifufuuf korri sabaa (yaa’iin waliigalaa) ALA Bitootessa 13 2021 Finfinneetti adeemsifamee Jaal Biqilaa Araarsoo hayyuu duree ABO ta’uun filatamuu eeraniiru. Seerri ittiin bulmaata addichaas akka seerri biyyattiifi Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa barbaadutti fooyya’ee boordichaaf ergamuu ibsaniiru.
“Boordichi seera ittiin bulmaataa ABO fooyya’eefi hogganaa haaraa addichaa filataman waan hinfudhanneef Mana Murtii Olaanaa Federaalaatti iyyannee nuu murteesseera” jedhu.
“ABOn caasaasaa sirnaan guuttatee sochiinsaa gara fuulduraa karaa seera qabeessaan ittifufa. Rakkoonsaa kan furamu kora sabaatiin waan ta’eef rakkoon addichaa furameera jennee amanna. Namootni rakkoo qaban garuu fudhachuu dhiisuu ykn irraa hafuu danda’u” jedhan.
Waa’ee miseensota ABO hidhaa jiraniis mootummaafi qaama dhimmichi iaallatu gaafachuudhaan hordofaa jirra kan jedhan Jaal Qajeelaan, qaamoleen dhimmichi ilaallatu (poolisoonni) dhimmasaanii mana murtiitiin qabamee akka jiru ibsuufii eeraniiru.
Miseensotasaanii hanga sadarkaa aanaatti hidhaman hordofanii hiiksisuuf tattaafachaa jiraachuus ibsanii, kanneen balleessa qaban yoo jiraatan adda bahee akka beekamuuf gaafachaa jirra jedhan.
Gorsaan Hayyuduree ABO Jaal Ibsaa Nagawoo gamasaaniin akka jedhanitti, rakkoo hogganaa ABO duraanii, Jaal Daawud Ibsaafi hoggantoota ABO haaraa gidduutti uumamee ture yeroodhaan furamuu dhabuun filannoo biyyaalessaa baranaarratti akka hinirmaanne isaan taasiseera.
Dhumarratti garuu manni murtii hoggantoota ABO haaraa filatamaniif murteessuufiin beekamtii kan kenneef ta’uufi korri sabaa adeemsifatanis fudhatamummaa argachuu eeran.
ABOn erga yaa’ii waliigalaa adeemsisuun hoggansa haaraa filatee booda yeroon filannoo daran waan walitti dhiyaateef filannoo biyyaalessaa marsaa 6farratti hirmaachuu hindandeenye kan jedhan Jaal Ibsaan, “Hayyudureen duraanii ABOn filannoo biyyaalessaa marsaa 6farratti akka hinhirmaanne gochuufi rakkoo hoggantoota addichaa gidduutti uumame ture dafnee furuu dadhabuun filannicharratti akka hinhirmaanne nu taasiseera” jedhu.
Nuti karaa nagaafi seera qabeessaan qabsoo keenya ittifufna kan jedhan Jaal Ibsaan, “Kanneen karaa seeraan alaa qabsaa’anis addicha keessa turan. Filannicharratti hirmaachuu dhabuun keenya rakkoolee keessoo keenyaatiin waan ta’eef qaama quba ittiqabnu hinqabnu. Filannoocharratti hirmaachuu dhabuu keenya nu gaddisiisus murtee ummataa garuu ni kabajna. Filannoon biyyaalessaa marsaa ja’affaa haala rakkisaa keessatti adeemsifamus filannoowwan kanaan dura adeemsifamanirraa adda” jechuun ibsan.
“Paartiileen morkattootaa filannicharratti hirmaatan mo’amanis filannichi haqa qabeessa ta’uu ibsaniiru. Nutis filannichaan ala taanee filannichi haqaqabeessa miti jechuu hindandeenyu. Filannochi biyyattiidhaaf jalqabbii gaariidha” jedhan.
Gara fuulduraatti ABO jaarmiyaa dimokraatawaafi gurmuu dargaggootaafi kutaalee hawaasaa maraa ta’ee filannoo marsaa ittaanurratti hirmaachuuf jabaannee hojjenna kan jedhan Jaal Ibsaan, akkasumas paartii biyyaalessaa ta’ee miseensota sabootaafi sablammoota biroo of keessatti hammatee socho’uufis kan tattaafatu ta’uu eeran.
Qabsoon hidhannoo kana booda barbaachisa miti kan jedhan Jaal Ibsaan, paartiinsaaniis isaanis karaa nagaatiin qofa qabsaa’uun jalqabbiin amma jiru akka cimuuf kan hojjetu ta’uu beeksisaniiru.
Gaazexaa Bariisaa Adoolessa 17/2013